Hay’ad Caalami oo soo dhaweysay xukunka lagu riday Maxamed Cabdi Afweyne. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Hadal ka soo baxay Hay’adda Badbaadinta iyo Taageero-siinta Maraakiibta Caalamiga ee “The International Seafarers Welfare and Assistance Network” ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan Xukunka lagu riday Maxamed Cabdi Afweyne oo ahaan jirey Hoggaamiye-burcadeed, kaasi oo isbuucii hore lagu xukumay Xabsi 20-sanno ah.
Hay’addaasi oo magaceeda loo soo gaabiyo (ISWAN) ayaa sheegtay in Afweyne oo ahaa Hoggaamiye Burcad-baddeed ka dambeeyey falkii lagu afduubtay Markabka MV Pombei bishii April ee sannadkii 2009-kii.
Waxay kaloo sheegtay in xilligii la sii daynayey Markabka MV Pompeii inay Burcad-baddeeda Soomaalida afduub u haysteen 12 Markab oo ay la socdeen in ku dhow 200 Badmaaxiin.
Hay’adda waxay kaloo tilmaamtay inuu xilli adag ahaa dhibaatada haysatay tiradda badan ee Badmaaxiinta la afduubtay iyo Qoysaskooda, iyadoo ay hoos u dhaceen Maraakiibta lagu qafaalan jirey Somalia.
Dhinaca kale, Madaxa Barnaamijyadda ee Hay’adda ISWAN, Tom Holmer ayaa tilmaamay inay Maxamed Cabdi Afweyne hawl qaali ah u ahayd falalka Burcad-baddeednimo, halka ay murugo iyo saboolnimo la soo deristo Badmaaxiinta la afduubto iyo qoysaskooda.
Waxa uu ugu dambeyntii uga mahadceliyey Dowladda Belgium hawshooda ku aadan sidii Caddaaladda loo hor keeni lahaa kuwa dhibaateeya Badmaaxiinta.
Hay’adda ISWAN waxay Xaruntooda Dhexe ee ku taalla dalka Britain waxay kaloo taageero siiyaan Qoysaska iyo Waalidiinta aan wax biil ah helin muddada Badmaaxiinta afduubka loogu haysto Xeebaha Somalia.
Bishan 14-dii ayey ahayd markii Maxkamad ku taalla magaalladda Bruges ee W/galbeed Belgium xukun 20-sanno ku riday Maxamed Cabdi Afweyne, halka Madaxweynihii hore ee Maamulkii Ximan iyo Xeeb, Maxamed Macallim Aadan “Tiiceey” lagu xukumay xabsi 5 sanno ah.
Maxkamad Australia oo xukun ku riday Haween Somali oo si qarsoodi u guday gabdhahooda.